माईक्रोसफ्ट वर्ड (MS-Word) भनेको के हो ? यसका बिशेषता लेखि बैंक तथा वित्तीय सस्थामा यसको प्रयोग कसरि हुन्छ लेख्नुहोस् ? - सरकारी जागिर
Microsoft Word को परिचय :-
माइक्रोसफ्ट वर्ड एक Word processing package हो । यो Ms-office pack अन्तर्गतको एक उत्पादन हो। शब्दहरूलाई विभिन्न रूपमा आवश्यक सम्पादन गरी विभिन्न प्रकारका अक्षर र शब्दहरूलाई मिलाएर फाइलमा भण्डार गर्नु वा छाप्ने कार्य गर्ने कार्यलाई वर्ड प्रोसेसिङ (word processing) भनिन्छ। आजको समयमा छिटो, सफा र व्यवस्थित लेखाई अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ। यही आवश्यकतालाई माइक्रोसफ्ट वर्डले पुरा गरिदिएको छ। वर्ड प्रोसेसिङ कार्यलाई आजकाल सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ। यो मानिसको दैनिक आवश्यकताभित्र पर्न थालिसकेको छ। यसको प्रयोगबाट मानिसको काम सहज र सरल भएको छ। त्यसैले यसको आवश्यकता दैनिक बढीरहेको पाइन्छ। वर्ड प्रोसेसिङ मा माइक्रोस ट वर्ड नै सबै भन्दा बढी प्रचलनमा रहेको छ। यो प्रयोग गर्न सरल र थोरै मात्रामा ज्ञान भएमा पनि सजिलै सँग चलाउन सकिन्छ।
माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने तरिका
• पहिले कम्प्युटरलाई खोल्ने । त्यसपछि विन्डोजको डेस्कटप देखा पर्दछ ।
• Start वटन क्लिक गरी Program बाट Microsoft word लाई क्लिक गर्ने ।
• Office package लाई office shortcut bar मा राखी डेस्कटपमा राखीएको छ भने Microsoft word को icon मा गएर क्लिक गर्ने । त्यसपछी माइक्रोसफ्ट वर्डको विन्डोज देखिन्छ।
• यदि office shortcut bar को प्रयोग गरी office package लाई desktop मा राखिएको अवस्थामा word को आइकनमा क्लिक गर्नुपर्दछ ।
माईक्रोसफ्ट वर्डको विशेषताहरू (Characteristics of MS-Word)
माईक्रोसफ्ट वर्ड एक सर्वव्यापी र सबैभन्दा लोकप्रिय एप्लिकेसन प्रोग्राम हो । प्रयोगकर्ताले चलाउन सजिलो हुने र सम्पूर्ण विशेषताले भरिपूर्ण यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरको देहाय बमोजिमको विशेषताहरू छन् ।
• कागजातहरूको प्रशोधन गर्ने ।
• कागजातलाई सुरक्षित रुपमा भविष्यको प्रयोजनको लागि संचय गर्ने ।
• कागजातलाई प्रिन्ट गर्ने ।
• अक्षर, अंक, संकेत चित्र तथा ग्राफिक्सलाई प्रविष्ट गर्ने ।
• टेवल बनाउन सकिने।
• पासवर्डको प्रयोग गरी फाईललाई सुरक्षित बनाउन सकिने।
• मेल मर्ज सुविधाले एकै पटक धेरैलाई मेल पत्रहरु बनाउन सकिन्छ।
• कागजको साईज, मार्जिन मिलाई आकर्षक बनाउन सकिने
बैंक तथा वित्तीय सस्थामा यसको प्रयोग
वर्ड प्रोसेसिङ सिष्टमको सबै भन्दा लोकप्रिय कम्युटर प्रोग्रामको रुपमा MS-Word रहेको छ । यसको निर्माण अमेरिका स्थित माईक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले गरेको हो । जसले अफिस प्याकेज अन्तर्गत विविध कम्प्युटर प्रोग्राम निर्माण गरेको छ । माईक्रोसफ्टवर्डको प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा चिठी पत्र लेख्ने, कर्जाका फाईलहरू तयार गर्ने, टिप्पणी लेख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने साथै ग्राहकका सूचनाहरू संग्रह गर्ने सम्मका कार्यहरू गर्दछन् । माईक्रोसफ्ट वर्डले नयाँ Document निर्माण गर्ने, त्यसमा अक्षर अंक तथा संकेतहरू प्रविष्ट गर्ने अक्षरलाई प्रशोधन गर्ने, लगायत विविध कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।
माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा चिठी पत्र लेख्ने, कर्जाका फाईलहरू तयार गर्ने, टीप्पणी लेख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने साथै ग्राहकका सूचनाहरू सङ्ग्रह गर्ने सम्मका कार्यहरू गर्दछन्। । माईक्रोसफ्ट वर्डले नयाँ Document निर्माण गर्ने, त्यसमा अक्षर अंक तथा सङ्केतहरू प्रविष्ट गर्ने, अक्षरलाई प्रशोधन गर्ने, कागजातलाई प्रिन्ट गर्ने, चित्र तथा ग्राफिक्सहरू समावेश गर्ने लगायतविविध कार्यहरू गर्न सकिन्छ। माईक्रोसफ्ट वर्डमा अक्षरहरूको Type, Save, Copy, Paste, Find, Replace, Format, Print, Insert, Header, Footer, Auto Current, Hypernate आदि कार्य हुन्छ।
माईक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोगले प्रयोगकर्ताले आफ्ना मनमा भएका अभिव्यक्तिहरूलाई किवोर्डको सहायताले कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्दछन् । मिलाउने प्रविष्ट पश्चात् वर्डले उक्त शब्दहरूलाई संरचना अन्य महत्वपूर्ण प्रशोधन समेत गर्दछ ।
अन्त्यमा माईक्रोसफ्ट एक लोकप्रिय र सर्वव्यापी एप्लिकेसन प्रोग्राम हो जसको प्रयोगले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापन र ग्राहक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्न सक्दछन् । यसको प्रयोग निःशुल्क भए पनि सेवा सुविधा भने अत्याधिक रहेका छन् । अत : बैंकले यसको बढी भन्दा बढी सुविधा लिनु आवश्यक छ ।
Tagged loksewanepal rastra banknrb
लोकसेवा तयारीको लागि अनलाइन परिक्षा सेट २
November 15, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir
आधार दर अर्थात् Base Rate गणना विधि
June 23, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir